KUCHENGA Vagadziri uye vanotengesa - China KUCHENGA Fekitori
Yakagadzirirwa mini excavator kuchera. Mhando dzakasiyana dzevanochera uye backhoe loaders dzinogona kuenzaniswa zvakakwana. Inonyanya kushandiswa kune akawanda maficha uye zvine mwero hasha zvinhu zvakadai sevhu, loam, mavhu uye ivhu.
Excavator General Duty Kuchera Bucket rinoshandiswa muchiedza chebasa mashandiro sekuchera uye kurodha kana ivhu, jecha, dombo rakasununguka uye mavhu, nezvimwewo Simba rakakura, yakasimba simbi simbi simbi uye yepamusoro bhaketi adpater inogona kuchengetedza nguva yekuzarura uye kuwedzera kushanda nesimba, Bhaudhi yekusarudza pa kumucheto kunowanikwa.range pamusoro pe1 kusvika makumi masere ematani muchina.Yakagadzirwa kuti ienderane nemuchina wekutambira.
Bonovo Yakasimba Duty Bucket ine maficha: Yakasimba uye yakasimba; yakasimba yekupfeka-simbi simbi NM400 kana Hardox inoshandiswa kugadzira main blade ndiro, divi reza ndiro uye yekusimbisa ndiro ye base ndiro. Reinforcement mahwendefa, epadivi ekurinda mahwendefa, edziviriro mahwendefa uye yakatsaurirwa bhaketi adapters ae yakagamuchirwa, iyo yekudyidzana inosimudzira hasha uye kukotama kushorwa kwebhaketi.
Kushanda: Yekuchera ivhu rakaoma nematombo akaoma kana kurodha marara uye mavhu, kurwisa bhaketi rine mabhureki mumashandisirwo ane hasha senge dombo rakasimba. Bhakiti rinounza yakakwira nhanho yekudzivirira kwekupfeka kwehupenyu hwakawedzerwa mune zvine hukasha mafomu ekushandisa.